အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: သူများပျော်လို့မပျော်နိုင် DVB (Democratic voice of Bingali)
သူများပျော်လို့မပျော်နိုင် DVB (Democratic voice of Bingali)
Aung Pan FB
DVB အသံလွှင့် ဝက်ဆိုဒ်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။ DVB ကဖေါ်ပြထားကတော့ ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ ဒေါ်စုငြိမ်နေပြီး ဒေါ်စုကို ရိုဟင်၈ျာအရေးအရေးမှာ မစွမ်းဆောင်နိုင်သူလို့ လေ့လာသူကပြောစကားမျိုးလည်းဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Some observers say she has no option other than to remain silent as politically, she cannot afford to antagonise the majority Bamar Buddhists, including powerful opinion makers like the monks, who vociferously oppose rehabilitating the Muslim Rohingyas whom they regard as illegal aliens and should be deported back to their country of origin, Bangladesh, or some other third country.
ဒေါ်စု က လန်ဒန်ရောက်တော့ BBC ရုံးခန်း၊ အမေရိကားရောက်တော့ VOA နဲ့ RFA ရုံးခန်းတွေကို ချက်ခြင်းသွားလည်တယ်၊ မြန်မာဌာနက ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ ရင်းနှိးစွာစကားပြော၊အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်၊ အင်တာဗျူးတွေ အင်္ဂလိပ်- မြန်မာ ၂ဘာသာနဲ့ ခွင့်ပြုတာတွေကိုတွေ့ရတယ်။..............နော်ဝေးနိုင်ငံရောက်ခဲ့တော့ နော်ဝေးအခြေစိုက် DVB ဒီမ်ိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ ရုံးခန်းသွားလည်တာလည်းမရှိတဲ့အပြင် DVB ဌာနကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနဲ့တွဲပြီး ရင်းနှီးစွာ ဓါတ်ပုံမရိုက်ခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလည်း? ................သိသူများဖြေပေးကြပါ။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:18 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook